Jawaabta Kooxda Xuquuqda Aadamaha Soomaaliya baadhitaanka Midowga Afrika ay ku sameeyeen xadgudubka Haweenka Soomaaliya – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Jawaabta Kooxda Xuquuqda Aadamaha Soomaaliya baadhitaanka Midowga Afrika ay ku sameeyeen xadgudubka Haweenka Soomaaliya
Kooxda Xuquuqda Aadamaha Soomaaliya oo ka koobtan tahay Midowga Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah Norway, Switzerland iyo Maraykana ayaa waxay si dhow ula socdeen wixii ka soo kordhay warbixintii Human Rights Watch ee xadgudubyadda iyo faro-xumaynta ay sameeyeen Ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya. Kooxda waxaa dhiiri galiyey jawaabtii Midowga Afrika.
Kooxdu waxay qiimeeyaan jawaabta sida taban la isugu dayay ee Midowga Afrika si ay u baadhaan eedaha xadgudubyada ka dhanka ah haweenka ee lagu sheega warbixinta HRW.
Kooxda waxa dhiirigaliyeye talo soo jeedinta warbixinta.
Hadda,waxaa muhiim u ah Midowga Afrika inay si firfircoon uga daba tagaan fulintooda.
Tani waxay ka dhigan tahay in talaabadda ugu horaysa ay qaadaan Hawlgalka Taageerada Nabada ee Midowga Afrika (PSO) la macaamilka wanaagsan.
Hadaba, Kooxdu waxay dhiirigelinayaan in Midowga Afrika ay si deg deg ah u bilaabaan waax madaxbanaan, hawlkar ah isla markaan si fiican loo qalabeeyey oo dusha kala socota.
Kooxdu waxay hoosta ka xariiqayaan muhiimada ay leedahay in ay wadaagaan masuuliyadda AMISOM iyo dalalka ciidanku ka joogaan si ay u qabtaan shakhsiyaadka lagu helo gabood-falka.
Waxay ugu yeedhayaan AMISOM TCC inay hubiyaan masuuliyadda buuxda isla markaana ay fududeeyaan helitaanka xubnaha si loo baadho dhamaan kiisaska khuseeyaa shaqaalahooda isla markaana loo baadho dhamaan eedohooda si dhex dhexaad ah lana hubiyo tilaabo sharci oo ku haboon la qaaday.
Waxaan ku dhiirigelinaynaa Midowga Afrika inay hubiyaan hababka lagu baadho ee la diyaariyay, inay ilaaliyaan kana jawaabaan arrimaha anshax-xumad iyo xadgudubyada ee hawlgalka nabada, si waafaqsan Siyaaasada Midowga Afrika ee aan u dulqaan arrimahan oo kale.
Wali waa muhiin, waxaan intaa sii dheer in uu Midowga Afrika Muqdisho ka aas aaso Habka Cabashooyinka oo Madaxbanaan, kaas oo sahlaya in dhibanayaasha xad-gudubyadu ay geeyaan cabashooyinkooda iyaga oo si buuxda loo ilaalinayo sirtooda si aan loo ugaandhsan.
Waxaan dhiirigelinaynaa SRCC iyo taliyayaasha waaxyaha in ay fariin cad u diraan shaqaalaha AMISOM in aan loo dulqaadan doonin cagajuglaynta iyo sheegida dadka ka badbaaday gabood falada. Hawlgelinta Maxkamadaha Militariga iyo Unuga Agaasimka Marshall si waafaqsan soo jeedimaha waxay noqonaysaa talaabo muhiim ah.
Waxaan dhiirigelinaynaa unuga ilaalinta Xuquuqda Aadamaha iyo Jinsiga ee Midowga Afrika kaas oo hubiya in hawlaha AMISOM loo qabtay iyada oo si adag loo raacayo Xeerka Caalamiga ah ee Bilow-aadamtinimada iyo Xuquuqda Aadamaha.
Waxaan ugu yeedhaynaa Midowga Afrika inuu hore u qaado tobabarada dheeraadka ah oo ku saabsan arrimaha xuquuqda aadamaha iyo jinsiga oo la siiyo hawl-wadeenada iyo shaqaalaha PSO (Iyada oo la raacayo Hab-raacyada Tababarada Jinsiga ee Hawgalada Midowga Afrika ee Taageera Nabada) iyo in sidoo kale la hawlgaliyo Kormeerayaasha Xuquuqda Aadamaha ee Goobaha Colaada.
Kooxdu waxay hoosta ka xariiqayaan masuuliyada in la ilaaliyo Xeerka Caalamiga ah ee Bilow-aadamtinimada iyo Xuquuqda Aadamaha ee Soomaaliya. Dhamaan waxaa loo siman yahay hay’adaha amniga iyo ciidanka qalabka sida ee dalka ka shaqeeya.
Kooxda HRWG waxay ugu yeedhayaan Dawladda Federaalka Soomaaliya inay bilowdo Qorshaha Hawlgalka Qaranka ee ka soo horjeeda xad-gudubyada jinsiga iyo damaanad qaadka isticmaalka nidaamka sharciga iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha iyo dadka khatarta ku sugan.
AMISOM iyo Ciidanka Amaanka Soomaaliya waxay qayb muhiim ah ka qaataan in la sameeyo xaaladaha sahlaya in Soomaalidu ay awood u yeeshaan kuna raaxaystaan xuquuqaha aas aasiga ah.
Bulshada Caalamku waxay sii wadaysaa inay si dhow ugala shaqeeyaan AMISOM iyo Ciidanka Amaanka Soomaaliya amuurtani iyo in ciidanku ku dhex shaqeeyaan nidaamka xuquuqda aadamaha.
Dhageyso:Warka Mayge Galab Ee Radio Dalsan 12-05-2015
Dhageyso: Warka Habeen ee Radio Dalsan 12-05-2015